ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ လေတန်ဘိန်းစကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးနာမဖြင့်မှလူသိများသူပြန်ထွက်ခွာမယ့်အားကိုး၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; " 'အဆိုပါ Duke"။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေတန်ဘိန်းစကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်များစွာသော OFF နှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကို ON-အသံနည်းနည်း-လူသိများတကယ်တော့ရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်တယ်, သူသည်အ မိမိအ Set-piece အကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များများအတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများ။ သို့သော်ပရိသတ်များအသာလက်အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောလေတန်ဘိန်းစဇီဝအကြောင်းအများကြီးကိုငါသိ၏။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
လေတန်ဘိန်းစကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
လေတန်ယောဟန်သည်ဘိန်းစ Kirkby အတွက် 11th ဒီဇင်ဘာလ 1984 သည်မစ္စတာမှယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်မစ္စယောဟန်သည်ဘိန်းစရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦး Sagittarius ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
Kirkby, မာဆေးဆိုက်ထဲမှာကြီးပြင်း, ဘိန်းစစိန့်ယောသပ်သည်အဆိုပါအလုပ်သမားကက်သလစ်မူလတန်းကျောင်း၌ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ဒေသခံလီဗာပူးလ်မူလတန်းကျောင်းသူ့ကိုပေးခဲ့တယ် တပ်မက်အားကစားကာလအတွင်းမှာအပြိုင်အဆိုင်ဘောလုံးကစားရန်အခွင့်အလမ်း။ သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အစောပိုင်းကတိတော်များကိုမြင်ပြီးနောက်, သူ့မိဘများကသူတို့သားသည်အဘယ်သူ၏အပတ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုလေတန်ဘိန်းစလေ့လာမှုများနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဘူးနင်္ဂနွေနေ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံး join လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: တနင်္ဂနွေလိဂ်ဘောလုံးပိုပုံမှန်အတိုင်းစနေနေ့မှဆန့်ကျင်အဖြစ်, တနင်္ဂနွေပေါ်မှာကစားသောအသင်းအဖွဲ့ Football League ကိုဖော်ပြရန်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
အလားအလာကလေးသည်အဖြစ်လိဂ်ဘောလုံးပူးပေါင်းနေသော်လည်း 10 ၏အသက်အရွယ်မှာတဦးတည်းကိစ္စနျြရစျ။ လေတန်ဘိန်းစတစ်ရှက်ဆိနှင့်လူကန်လန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှက်ဖြစ်ခြင်းသူ့ကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်ကတခြားကလေးတွေရှိခြင်းမဟုတ်ဖန်ဆင်းသောအလွန်အမင်းဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျေးဇူးတင်စရာ, သူ့မိဘများနှင့်ကျောင်းဆရာ, ဆရာမသူ့ကိုသူ၏အရှက်ကြောက်စိတ်ကိုကျော်လွှားကူညီပေးခဲ့သည်။ ဒါကဘောလုံးသမားဖြစ်လာ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပေါ်။
လေတန်ဘိန်းစကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Fame မှထလော့
သူကအဲဗာတန်အတွက်အကျိုးစီးပွားအားဖြင့်ရှက်ကြောက်သည်အတိုင်းလေတန်ဘိန်းစ '' ကလေးဘဝ preference ကိုလီဗာပူးလ်အသင်းထက်အဲဗာတန်ပိုမိုခဲ့ပါတယ်။ သူကတခါအဆိုပါဂါးဒီးယန်းပြောသည်သကဲ့သို့၎င်း,
ငါသာငယ်ရွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလီဗာပူးလ်အတွက်အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲဘောလုံးစောင့်ကြည့်ကိုချစ်၏။ အဲဗာတန်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် 1995-9 ရိုက်နှက်တဲ့အခါမှာငါ 1 FA ဖလားဖိုင်နယ်အသက်0မှာခဲ့ပါတယ်။ ငါစနစ်တကျအဲဗာတန်ကိုကြည့်စတင်သောအခါဤဖြစ်ခဲ့သည်။
သူ၏အမေမေငါ့ကို Goodison Park ကငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကိုသွားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ သူမသည်လမ်းညွှန်မှုအဘို့အကြှနျုပျကိုထက်သုံးနှစ်အဟောင်းများကိုမူသောငါ့ဝမ်းကွဲအပြင်းအထန်တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ Kirkby ကနေဘတ်စ်ကား, 50p ရ, ပြီးတော့ကျနော်တို့အတွက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နိုင်သည်အထိအပြင်ဘက်ပတ်လည်မှာတွဲလွဲဆွဲထားချင်ပါတယ်သူတို့အစောပိုင်း-leavers သွားကြဖို့အတှကျပွဲစဉ်သို့ 75 မိနစ်အကြာတွင်မြို့တံခါးဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။ ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းချင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာမြို့တံခါးအပေါ်ဘဏ္ဍာစိုးခဲ့ကြသူတို့အကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များဖြစ်လျှင်သူတို့စှပွေခွငျးနှင့်ကိုရစေလိမ့်မယ်။ ငါတို့အဘို့အထွက်ကိုကြည့်ဖို့အသုံးပြုအထူးသဖြင့်တစ်ခုမှာကောင်လေး, ။ ကျွန်တော်ကံဖြစ်လျှင်သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်, အဲဒီမှာတံခါးကိုအပေါ်တစ်ဦး jobsworth ပါလိမ့်မယ်ကျနော်တို့ဘာမှမတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ "
တစ်အများကြီးအရွယ်ရောက်လူငယ်နှင့်အမျှဘိန်းစအပြီးအပိုင်အစောပိုင်းကဖော်ပြထားအဖြစ်ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အတူနှင့်သူ၏မိဘများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများထံမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေနဲ့အများကြီးကြုံနေရပြီးသည့်နောက်သူ့ရှက်ကြောက်စိတ်ကျဆင်းသွားသည်။ သူကအနာဂတ်ပညာရှင်များနှင့်အတူ Key ကိုနည်းလမ်းများကိုခေါ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဘို့တနင်္ဂနွေပရီးမီးယားလိဂ်ကစားဆက်လက် ရိုင်ယန်တေလာ (နယူးကာဆယ်မှာတက်အဆုံးသတ်တဲ့သူ) နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Nugent (ပို့စ်မောက်နှင့် Leicester, အခြားသူများအကြား) ။
ဒါဟာလေတန်ဘိန်းစတနင်္ဂနွေလိဂ်မှဘွဲ့နှင့်အဲဗာတန်ဖြင့်သင့်ကိုခေါ်တယ်သတိပြုပါရန်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဆိုပါအကယ်ဒမီသို့လက်ခံခဲ့သည်တယ်။ ကလပ်နှင့်အတူအခြားအတည်ပြုချက်ကိုလမ်းကြောင်းများတွင်ဘိန်းစအကယ်ဒမီကနေပယ်ချခဲ့တယ်။ ဝီဂန်မှအခြားစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်စွာသွားလေ၏။ သူကသူတို့ရဲ့အကြီးတန်းအဖွဲ့ရာထူးတိုးတယ်သောအခါသူ 2002 သည်အထိဝီဂန်အတွက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဘိန်းစကွင်းလယ်နှင့်တိုက်ခိုက်မှုအတွက်ကစား; သူကဝီဂန်မှာမိမိအကြီးတန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့သည့်အခါကသူနောက်ကျော left အနေအထားတွင်ကစားရန်စတင်ခဲ့ကြောင်းသာဖြစ်ခဲ့သည်။
အံ့ဖှယျနညျး, လီဗာပူးလ်သူတို့သခင်၌ဤမျှလောက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့အဖြစ်လက်ဝဲ-ကျောအဘို့သွားကြဖို့ရွေးချယ်။ ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ၏အဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အဲဗာတန်လည်းခေါ်ဆိုသည် လာ. အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ကဲ့သို့ကြားနာပေါ်၌ဘိန်းစခံစားရတယ်။ သူကအများကြီးသှေးဆောငျနှင့်တောင်းပန်ပြီးနောက်အဲဗာတန်ကိုလက်ခံလည်းသူ့မိဘနှင့်နီးစပ်သောနေဖို့ရန်လေလံ၌တည်၏။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ကမကြာခဏဆိုသညျကားအဖြစ်ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
လေတန်ဘိန်းစကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
တိုင်းအကြီးလူကိုနောက်ကွယ်မှာရှိတစ်ဦးအကြီးအမြိုးသမီးတင်, ဒါမှမဟုတ်နိုင်အောင်စကားကိုတတ်၏။ ထိုအလုနီးပါးတိုင်းအင်္ဂလန်ဘောလုံးသမားနောက်ကွယ်မှတစ်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဇနီးသို့မဟုတ်ရည်းစားရှိတယ်။
ရုံနဲ့တူ Toby Alderweireld, ဘိန်းစရာခေလအမည်ဖြင့်မှည့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝရည်းစားနှင့်အတူကစားကွင်းအပေါ်သူ၏ဆကျဆံရေးစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို bestie status ကိုမှသည်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကသူတို့ကိုခေါ်သွားတယ်။ ဘိန်းစတစ်ချိန်ကရာခေလသည်မိမိမေတ္တာတော်ကိုကြေညာခြင်းနှင့်သူတို့သွားလာသောလက်ထပ်ထားပေးပါ့မယ်ရနိုင်ယုံခဲ့သည့်မိမိအအစောဆုံးကလေးဘဝအမှတ်တရများ၏တဦးတည်းပြန်ပြောပြ။
2009 မှာတော့လေတန်ဘိန်းစလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအခမ်းအနားအတွက်ရာခေလသည်လက်ထပ်တယ်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်လေတန်ရုံ3နှစ်အရွယ်မှာမွေးဖွားခံရခြင်းကိုပထမဦးဆုံးတဦးတည်းအတူ 18 ကလေးများရှိသည်။ အောက်ကလက်ဝဲမှဒုတိယဖြစ်သောဘိန်းစ '' ငှက်၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
Rachael ရင်သားကင်ဆာကမ်ပိန်းများအဘို့ပိုက်ဆံမြှင့်ကူညီရန်သူမခင်ပွန်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များကိုအပေါင်ကြသူကတခြား Evertonian မယားများနှင့်ရည်းစားအကြားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
လေတန်ဘိန်းစကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
လေတန်စပ်စုနှင့်လုံ့လရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအပွင့်လင်းစိတ်နှင့်ဒဿနရှုထောအမြဲရှာဖွေခြင်းနှင့်အသက်တာ၏စစ်မှန်သောအဓိပ်ပာယျနှငျ့ပတျသကျလှည့်လည်ဖို့သူ့ကိုလှုံ့ဆော်။ သူ extrovert အကောင်းမြင်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်သည်, ပြောင်းလဲမှုများကို likes ။ ဘိန်းစကွန်ကရစ်လုပ်ရပ်များသို့သူ၏အကြံအစည်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်နှင့်သူ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်ဘာမှလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
လေတန်ဘိန်းစအားသာချက်များ: လေတန်ဘိန်းစပံတောင်းကြေးနီတူးဖော်ရေး, ရက်ရက်ရောရောဖြစ်ပြီးဟာသများစွာသောအသိရှိပါတယ်။
လေတန်ဘိန်းစအားနည်းချက်များ: အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲ undiplomatic ဘာမှပြောပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်အရာကိုလေတန်ဘိန်းစ likes: လွတ်လပ်ခွင့်, ခရီးသွား, ဒဿနနှင့်သူ၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေနှင့်အတူအပြင်မှာဖြစ်ခြင်း, မိုင်ကိန်း.
လေတန်ဘိန်းစနှစ်သက်မှုမရှိကဘာလဲ: သတ်ခံရ Clingy ကလူ, Off-the-မြို့ရိုးကိုသီအိုရီ, အသေးစိတ်ကို။
လေတန်ဘိန်းစကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
လေတန်တစ်ဦးအောက်ပိုင်းလူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံကနေလာပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့အချိန်အပျေါမှာ, သူ့မိဘများဆိအဖြစ်သူ့အဘို့အပြည့်အဝအဲဗာတန်ရာသီလက်မှတ်မတတ်နိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ကြဘူး။ သူတို့ကသူတို့၏သားလေတန်အဘို့အပင်တစ်ခုတည်းအဲဗာတန်လက်မှတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါမတတျနိုငျကွသညျ။ ဖခင်နှင့်မိခင်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ချိန်ကသူတို့၏သားဖွင့်ဖို့ထွက်ပေါက်တံခါးတို့အဘို့အ Goodison Park ကပြင်ပမှာစောင့်ဆိုင်းမယ်လို့ဖို့သူ့အစ်ကိုများကလိုက်ပါသွားခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ အခမဲ့ဆယ်ပါးအဖိုးတန်မိနစ်!
ဒါဟာသူ့ဆွေမျိုးများအပါအဝင်သူ့မိသားစုအတွက်လူတိုင်းကိုလီဗာပူးလ်သို့မဟုတ် Evertonian ဖြစ်စေပရိတ်သတ်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါရန်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိန်းစဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့သားနီးကပ်နေဖို့ချစ်သောသူသည်မိမိချစ်ရာသခင်သည်မိဘများ၏ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကြာမြင့်စွာအဲဗာတန်မှာကနျြရပါပြီ။
"ငါသည်ထိုနေ့ရက်သည်အိမ်မှာသညျ လာ. ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ်။ ငါအလုံအလောက်ကောင်းသောမဟုတ်ခဲ့ပြောသည်ခံရဖို့အကြီးအကျယ်ထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအရပ်မှငါဝံပုလွေတွေဟာ သွား. စမ်းပွဲကစားခဲ့ပါတယ်။
နှစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်အဲဗာတန်ယျတျောနှငျ့အတူပျော်ရွှင်ဖြစ်လာပြီးသူ့ကိုပြန်လာချင်တယ်။ ပထဝီအနေအထားအရငါ့မိဘများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်ငါ သွား. အဘယ်အရပ်ငါ "တည်းခိုကြောင်းပါပဲ။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေတန်ဘိန်းစကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် !.
ဂျိမ်း Milner ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အက်ရှလေယန်းကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အာဒံကို Lallana ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Kyle Walker ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်